ငွေလေး ( ၅၀ ) နဲ့ အနာဂတ် နိုင်ငံတော် ရဲ့ ရင်သွေးတွေ ကို ကင်ဆာ အဖြစ် ခံနေကြဦး မှာ လား..? – Na Pann San
Na Pann San W | March 4, 2020 | Local News | No Comments
ဒီ မနက် ဆင်ရွာ မှာ ဖိုးတရုပ်ကို သူ့ အမေ က ဈေးဆိုင် က မုန့်ဝယ်ကြွေး တယ် ။ ပုံမှာပါတဲ့ အသားပြားမုန့် တဲ့ ၅၀ ကျပ်ပေး ရတယ် . သူ့ အကို ဖိုးကတုံး ကပြောတယ် အဲ့တာ တရုပ်မုန့် တဲ့ နေ့တိုင်းစား မှသေ တာ တဲ့ တခါတခါ စားရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ဖူး တဲ့.. သူ့ညီလေး ကိုပြောပြနေတာ ။ ကျွန်တော်ဘေး ကအသာနားထောင်ရင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ ဒီစာကိုရေးတယ် အနံ့ကလဲ တရုပ်မဆလာနံ့လိုလို အသားညှီနံ့လိုလို ခပ်စူးစူး ကြီး ငရုပ်နံ့လို မွှန်မွှန် ကလေးက အားရပါးရစားနေတယ်ဗျာ.. အဲလို မုန့်မျိုးတွေ ၇၃/၂၈ လမ်း မင်းသီဟ နား မှာ တွန်းလှည်းတွေ စက်ဘီးတွေ ဆိုင်ကယ်တွေ နဲ့ လက်ကားရောင်းနေကြတာ ကြိတ်ကြိတ်တိုး
ပြည်သူချစ် အနုပညာရှင် ချစ်သုဝေ ရဲ့ အမေစု ပုံပန်းချီကားကြောင့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဂရက်ထနေပြီ ( ရုပ်သံကြည့်ရန် )
ကိုဗစ် ကာလ အတွင်း သိန်း​ပေါင်း ( ၇၀၀၀ )​ ကျော် လှူဒါန်း ခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မမဏိဇောတဓရ ဦးစိုင်းမျိုးဝင်း မိသားစု
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ပတ်သက် ၍ ရောဂါပိုးတွေ့ ရှိပါက ရွှေစာရံဘုရားပွဲ ကို ချက်ချင်း ရပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းအစိုးရပြော